Fidiram-bola ato anatiny : mitaky fampiasana fitaovana arifomba ny fampidiran-ketra | NewsMada
Fidiram-bola ato anatiny : mitaky fampiasana fitaovana arifomba ny fampidiran-ketra
Ny 4 hatramin’ny 6 septambra lasa teo, nandray fikaonandoha iraisam-pirenena momba ny hetra i Madagasikara. Nahitana firenena afrikanina sy eoropeanina nandray anjara tamin’izany. « Fampiakarana ny fampidiran-ketra amin’ny alalan’ny fampiasana teknolojia » ny lohahevitra. Tsapa mantsy fa mihena tsikelikely ny fanampiana avy any ivelany, avy amin’ny Banky iraisam-pirenena sy ny FMI, ka tsy tokony hiantehitra loatra amin’izany ny firenena, toa an’i Madagasikara.
Navoitry ny tale jeneralin’ny foiben-ketra, Razafindrakoto Iouri Garisse, fa «mitaky fanavaozana ny fomba enti-miasa amin’ny alalan’ny fampiasana fitaovana arifomba. Efa vonona amin’ny karazana fiovam-penitra amin’ny lafiny fitantanana i Madagasikara, saingy tsy mitovy ny habetsaky ny hetra miditra ». Nanazava ny tale jeneraly fa mbola tsy tafapaka amin’ny Malagasy mihitsy ny fahafaha-miditra amin’ilay teknolojia noho ny halafony sy ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa.
Ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna
Raha momba an’i Madagasikara manokana, betsaka ny asa fitadiavam-bola tsy manara-dalàna (informel). Raha natao ny fanadihadiana eto Antananarivo sy ny manodidina, 67,25 % ny asa fitadiavam-bola tsy manara-dalàna. Tsy manana ny famantarana azy manokana momba ny hetra (Numéro d’identité fiscale-NIF) daholo ireo. Misy amin’ireo ny voasokajy ho orinasa salantsalany sy madinika. Fantatra izany amin’ny fampiasana fitaovana moderina noho ny fanampian’ny GIZ, ao anatin’ny tetikasa fampandrosoana kaominaly.
Laharam-pahamehana amin’io tetikasa io ny fampitomboana ny fidiran-ketra any amin’ireny kaominina ireny. Koa tokony hihena 20 % izay tsy fanarahan-dalàna izay amin’ny taona 2018, raha ny vinavinan’ny foiben-ketra. Misy fiaraha-miasa amin’ireo Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireo (CTD) sy ny foiben-ketra, natao sonia ny 8 septambra lasa teo.
Tsy ampy fitaovana hoenti-miasa ny sampandraharahan’ny hetra, na efa tokony hampiharina aza ny filazam-pananana sy fandoavam-bola, amin’ny alalan’ny internet. « Tsy afaka miandry famatsiam-bola avy any ivelany hatrany isika, ilaina ny fidiram-bola ato anatiny », hoy Razafindrakoto Iouri Garisse.